Kanaalka TV -ga ma ku daawan karaa Photocall TV | Androidsis
Ignacio Sala | 16/10/2021 12:00 | Streaming, Tababarada
Markay timaado daawashada telefishinka moobilkaaga, sanad walba codsiyo cusub iyo / ama bogag internet ayaa noo muuqda oo noo oggolaanaya inaan sidaas u sameyno si raaxo leh oo fudud. TV -ga Photocall waa degel noo oggolaanaya helitaanka tiro badan oo kanaallo TV oo toos ah adigoon isticmaalin barnaamijyada.
Intaa waxaa dheer, waxay ku shaqaysaa labada aaladda gacanta iyo kombiyuutarrada, sidaa darteed waxaan u adeegsan karnaa degelkan si aan u daawanno telefishanka tooska ah. Laakiin Waa maxay kanaalada TV -ga ee aan ku daawan karo Photocall TV? Haddii aad rabto inaad ogaato dhammaan kanaalada uu Photocall TV na siinayo marin, waxaan kugu casuumayaa inaad sii waddo akhriska.
1 Waa maxay Photocall TV
2 Kanaalada TV -ga Photocall
2.1 Kanaalka qaranka
2.1.1 Kanaalka guud
2.1.2 Kanaalka mawduuca
2.1.3 Kanaalka madaxbannaan
2.1.4 Kanaallada carruurta
2.1.5 Kanaallada isboortiga
2.2 Kanaallada caalamiga ah
2.4 Kanaallada raadiyaha
Waa maxay Photocall TV
Androidsis waxaan ku daabacnay maqaallo dhowr ah oo aan ka hadalno TV -ga Photocall, bogga internetka oo na siiya marin tiro badan oo ah kanaalada telefishanka adduunka oo dhan, ma aha oo kaliya Spain.
Websaytka waxaa lagu maalgeliyaa xayeysiisyo, xayeysiisyo mararka qaarkood aad u fara badan oo lagu muujiyo shaashad buuxda taas oo lagu taliyay adeegso biraawsar leh xannibaad xayeysiis.
Si ka duwan codsiyada kale ee sanadihii ugu dambeeyay ka soo degay Play Store ama dibadiisa oo dhammaaday baaba'ay, Photocall TV wuxuu adeegsadaa calaamadda tooska ah ee kanaalada baahiya waxyaabaha ku jira internetka, sidaa darteed xiriiriyeyaasha had iyo jeer way shaqeeyaan.
Sidaan uga faallooday, waxaan arki karnaa kanaallo telefishan oo ka kala yimid daafaha dunida. Waxa ugu fiican, xaaladaha badankood, marka waxa la baahinayo aysan ahayn filim ama taxane, waxaan geli karnaa nuxurka looma baahna in la isticmaalo VPN kaas oo dhigaya IP -gaaga dalka la soo saaray.
Tan waxaa ugu wacan xuquuqda baahinta filimada iyo taxanaha, xuquuqda taas waxay ku kooban yihiin hal waddan ee kuma koobna dunida oo dhan. Markaan ogaanno waxa Photocall TV yahay iyo sida uu u shaqeeyo, waa waqtigii la ogaan lahaa kanaalada telefishanka ee laga arki karo madalkan.
TV -ga Photocall Kaliya waxay noo oggolaanaysaa inaan marinno kanaalada si guud loo baahiyo, taas oo ah, kanaallo isku mid ah oo aan ka dhegeysan karno telefishankayaga annaga oo aan bixin lacag -bixin. Madalkan, ha filanin inaad marin u hesho AXN, Fox, Channel Discovery, Calle 13 iyo kuwa kale.
Kanaalada TV -ga Photocall
Photocall waa madal uu abuuray Isbaanish, sidaa darteed waxyaabaha laga heli karo meesha ugu horeysa waa kanaalka dadweynaha ee laga heli karo Spain.
Waddooyinka qaranka dhexdooda, waa inaan u kala sooc qaybo kala duwans, maadaama aysan dhammaan bixinaynin nooc isku mid ah.
Waddooyinka guud, waxaan ka helnaa La 1, La 2, Antena 5, Telecinco, La Sexa iyo Cuatro. Lixdan kanaal ayaa ka kooban inta badan dhagaystayaasha telefishanka ee Spain.
Kanaalada mowduucyada laga heli karo TV -ga Photocall waa bilaash iyada oo loo marayo anteeno guri kasta badankoodna, marka laga reebo dhacdooyin aad dhif u ah, waxay la xiriiraan kanaalada telefishanka ee ugu waaweyn.
Qaar ka mid ah kanaalada mowduucyada ah ee aan ku hayno TVc Photocall waa Neox, Nova, Mega, A3S, Warshadda Sheekooyinka, Tamarta, BeMad, Ilaahnimada, Discovery Max...
Jaaliyad kasta oo Isbaanish ah, marka laga reebo marka laga reebo sida Bulshada Valencia, waxay leedahay wax u gaar ah kanaal goboleed, nuxurka lagu heli karo luuqadda gobolka, ugu yaraan inta ugu badan ee ku jira, maaddaama shaqada ugu weyn ee kanaaladan ay tahay kor u qaadista adeegsiga luqadda maxalliga ah.
Waxaa ka mid ah kanaalada gobolka ee laga heli karo TV -ga Photocall waxaan ka helnaa TV3, TeleMadrid, ETB, TVG (Telefishanka Galician), Koonfurta Channel (Telefishanka bulshada Andalusiya), Aragon TV, Channel -ka Extremadura, TV Can, La 7TV...
Kanaalada carruurta ee aan gacanta ku hayno iyada oo loo marayo Photocall TV waa Qabiil y Duulista inta badan. Waxaan sidoo kale heli karnaa kanaallo kale oo aan la aqoon sida Kids TV ama Pequería, hase yeeshee kuwa bixiya waxa ugu fiican waa Qabiil iyo Boing.
Kanaalada isboortiga sidoo kale waxay joogaan Photocall oo leh TDP (Tele Sport), TV -ga Brand, Gol TV… Iyada oo loo marayo kanaaladan waxaad ku raaxeysan kartaa tartamada isboortiga qaarkood sida TDP, halka kanaalka intiisa kale waxaad la socon kartaa wararka isboortiga oo aad dhif u ah inaad ku raaxaysato waxyaabaha cayaaraha nool.
Kanaallada caalamiga ah
Qeybta kanaalka caalamiga ah, Photocall TV wuxuu noo diyaariyaa inta badan kanaalada dadweynaha ee si xor ah hawada ugu baahiya inta badan waddamada, labadaba Mareykanka sida Kanada, Yurub, Laatiin Ameerika iyo xitaa kanaalada dalalka Carabta.
Si aad u hesho inta badan kanaaladaan, looma baahna in la isticmaalo VPN ilaa inta nuxurka la baahinayo adigaa iska leh oo aan ku salaysnayn xuquuqda baahinta ee madalku iibsaday.
Helitaanka uu Photocall TV na siinayo kanaaladan wuxuu la mid yahay kan laga helay bogagga shabakadaha kanaalada, sidaa darteed tayada waa isku mid.
Qaar ka mid ah kanaalada uu madalkani inoo diyaarinayo ayaa ah ABC, CBS, CNN, Fox, NBC, BBC, Sky news, wararka euro, RT, France 24, TV5 Monde, i24 News, USA Today, NASA...
Sababtoo ah tirada badan ee kanaalada uu Photocall TV noo diyaariyo, hel midka na daneeya waxay noqon kartaa hawl daal badan, maadaama aan loo diyaarin si kasta.
Nasiib wanaag, xagga sare ayaan haysannaa helitaanka mashiinka raadinta, mashiinka raadinta oo noo saamaxaya inaan si dhakhso ah u helno kanaalka aan rabno inaan aragno.
Qaybtan waxaan ka helnaa kanaalada mawduucyada ah ee nooc kasta leh, cuntada iyo isboortiga labadaba, waqtiga firaaqada, feerka, riwaayadaha sida Moto GP, ATP WTA, PGA Tour, NBA TV, NHL, Box Nation, Sky Sports, RedBull TV, Aventure Sports, Horizon Sports,
Qaybta Raadiyaha, waxaan ku helnaa idaacadaha waaweyn ee Spain oo leh Onda Cero, SER, RNE, Radio Marca, Kiss FM, Europa FM, Cadena 100, Los 40 marka lagu daro tiro badan oo ah saldhigyada maxalliga iyo kuwa gobollada.
Waxaan sidoo kale helnaa idaacadaha waaweyn ee Maraykanka, Yurub iyo Laatiin Ameerika, sida NBC, BBC, Sky News, NRF (France), VRT (Belgium)… si loogu magacaabo kuwa ugu caansan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Waa maxay kanaalada TV -ga ee aan ku daawan karo Photocall TV
5 -ta kulan ee ugu fiican shark ee loogu talagalay Android
5ta barnaamij ee ugu wanaagsan ee quudinta wararka ee Android si aad ula socoto